Web Design, Mobile Application, Software, Graphic Design, Digital Marketing Agency Myanmar | Source Code Co., Ltd Myanmar Purchasing (ဝယ်ယူခြင်း) - Source Code Myanmar
Supplierမှတဆင့်မှာယူထားသည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ Voucher No.(ဘောက်ချာနံပါတ်) ကိုရေးမှတ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း။
ကုန်ပစ္စည်းများကိုတခါတည်း Expired Date သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။
Purchase List တွင်သင်မှာယူထားသည့် Product များ၏ voucher များကိုVoucher စာရင်းသွင်းလိုက်သည့်နေ့၊ voucher နံပါတ်၊ Supplier အမည်၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး၊ လျှော့ဈေး၊ မိမိမှ ပေးချေလိုက်သည့် ပမာဏ၊ ပေးရန်ကျန်ရှိခဲ့သည့် အကြွေး၊ နှင့် အကြွေးကျန်အားပေးချေပြီးသည့် စာရင်းစသည်တို့ဖြင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း။
Purchase Delete Log တွင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Purchase List မှပယ်ဖျက်လိုက်ပြီ ဖြစ်သော voucher များကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ရုံသာမက Voucher များကို time filter အားအသုံးပြုပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုချင်းစီအလိုက် deleted လုပ်ထားသည့် voucher များပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်း။
Whole Boucher Delete(တစ်စောင်လုံးအနေဖြင့်ဖျက်ပစ်လိုက်သော voucher) နှင့် Partial Delete voucher (voucher တစ်စောင်လုံးအနေဖြင့်မဟုတ်ပဲ voucher တစ်စောင်အတွင်းရှိမှာယူထားသည့် product တစ်ခုချင်းစီအားဖျက်ပစ်လိုက်သော voucher) ဟူ၍စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
Web Design & Development Mobile Application Developement Software Development Identity & Graphic Design Digital Marketing
© 2021 All Rights Reserved. Source Code Co., Ltd..